मुख्य राजमार्गमा ३ हजार किलोमीटर सडक मर्मत गरिने « Rara Pati
मुख्य राजमार्गमा ३ हजार किलोमीटर सडक मर्मत गरिने
१२ मंसिर, काठमाडौं । सडक विभागले देशभरका मुख्य राजमार्गमा ३ हजार ३०० किमी सडकमा आवधिक मर्मतको काम गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा देशभरका मुख्य सडक (कोर रोड नेटवर्क) मा मर्मत गर्न लागिएको हो ।
आगामी पाँच वर्षमा मर्मत गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ । सवारी साधनको चाप बढी भएका सडकमा मर्मत गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पूरै बिग्रिएर पुनःस्थापना गर्ने सडकभन्दा पनि निर्माण भएको केही वर्ष भएकाले मर्मत चाहिने सडक छनोट गरिनेछ । उनले भने, ‘सडकअनुसार फरक–फरक किसिमको मर्मत चाहिन सक्छ ।’
सडक बोर्ड नेपालले वार्षिकरूपमा गर्दै आएको मर्मतभन्दा फरक सडकमा मर्मत गर्न लागिएको हो । सो मर्मतमा सडकको एक तह थप हुने अधिकारीले बताए । सामान्यतया सडक निर्माण गरिएको ५÷६ वर्षमा मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सडक त्यसभन्दा धेरै वर्षसम्म मर्मत हुन नसकेकाले अहिले गर्न लागिएको हो । अहिले मर्मत गर्न लागिएको सडकमा मुग्लिन–नागढुङ्गा सडक, कमला–ढल्केबर सडकलगायत छन् ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । आज रातिदेखि लागू हुने
गरे नहुने के छ र ? यो भनाईसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँस्ने एक किसान हुन् धन
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा भाग लिन बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तीन
संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको
मैले मान्छे मारेको छैन नी ! हँसायो भनेर किन पिर ? : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई आफुले हँसायो भनेर पिर नलिन आग्रह गरेका छन् ।